Itoobiya oo Masar ku eedaysay Khilaafka Doorashada Soomaliya iyo Soomaliland Hub Inay Siisay - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandItoobiya oo Masar ku eedaysay Khilaafka Doorashada Soomaliya iyo Soomaliland Hub Inay Siisay
Sarkaalkaan oo xil sare ka haya wasaarada arimaha dibada ee itoobiya isla markaana codsaday in aan magaciisa la shaacin ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Anadolu in “Masar ay xoojisay dadaalada xasilooni darada ah ee ka dhanka ah itoobiya iyo gobolka Geeska Afrika ee kacsan
Maamulka isbedel doonka ah ee Itoobiya, oo uu hogaaminayo raiisul wasaaraha abaal marinta Nobel Abiy Ahmed, oo xafiiska qabtay 2018, ayaa la kulmay caqabado badan oo amni gudaha iyo dibedba.
‘Khilaafka biyo xireenka’
Diblumaasiga ayaa sheegay in muddo ka badan nus qarni dhismaha Masar uu siinayay kaalmo dhaqaale, militari, iyo diblomaasiyadeed ciidamada Ethiopia ee hubeysan iyo kuwa aan hubeysneyn si ay u carqaladeeyaan xasilloonida iyo wiiqida Itoobiya isla markaana u fashiliyaan hamigooda ah inay ka faa’iideystaan ​​kheyraadka wabiga Niil.
Itoobiya waxay ka dhabeysay himiladeeda ku aaddan ka faa’iideysiga wabiga Nile iyadoo dhiseysa 5 bilyan oo doolar oo biyo xireenka Grand Renaissance Dam (GERD), kaasoo hadda la dhameystiray 78%, ayuu raaciyay.
Itoobiya waxay rajeyneysaa in wadahadaladii istaagay ee u dhaxeeyay Masar, Suudaan, iyo Addis Ababa ee ku saabsanaa biyo xireenka ay aakhirka ka dhalan doonaan xal guul u ah qof walba
“Waa marka la eego horumarkan in Masar ay xoojisay hawlaheeda qarsoon iyo kuwa cad ee ka dhanka ah Itoobiya labadii sano ee la soo dhaafay,” ayuu yidhi.
‘Taageerida fallaagada Gumuz’
“Waxaan haynaa sirdoon lagu kalsoonaan karo oo ah in Masar ay caawinaysay maleeshiyada Gumuz,” ayuu yiri diblomaasiga. “Wakiilada amniga ee Masar waxay la xiriireen hogaamiyaasha jabhada, waxayna ka shaqeynayaan sidii loo xoojin lahaa taageeradooda.”
Sarkaalka ayaa intaa ku daray, in Masaarida ay sidoo kale isku dayayaan inay raadiyaan saldhig ay ku shaqeeyaan Gumuz iyo sidoo kale jabinta militariga jabisay iyo sharci darada Jabhadda Xoreynta Shacbiga Tigreega (TPLF), oo ay taageeri jireen iyo kooxo kale.
“Waxaa mudan in la sheego in dhawaan Masar ay weydiisatay dowlada South Sudan inay siiso saldhig militari kooxaha,” ayuu yiri. “Laakiin mas’uuliyiinta Koonfurta Suudaan, oo si weyn u qiimeeya xiriirkeenna saaxiibtinimo, way diideen codsigan si aan la hubin.”
‘Suudaan ka dhanka ah Itoobiya’
Suudaan iyo Itoobiya waxay wadeen xiriir nabadeed muddo tobanaan sano ah inkasta oo muran xuduudeed soo jiitamayay uu ka taagnaa aagga beeraha ee loo yaqaan al-Fashaqa, oo ku dhow gobolka Amxaarada ee woqooyi galbeed ee Itoobiya.
Laakiin bishii Noofambar ee la soo dhaafay, iyadoo ay ciidanka Itoobiya ku mashquulsanaayeen la dagaallanka xoogagga TPLF, ayaa ciidammada Suudaan waxay la wareegeen gacan ku haynta aaggii lagu diriray.
Toddobaadyo kadib tallaabadaas, saraakiisha Suudaan waxay caddeeyeen in ciidanka Suudaan ay ku guuleysteen in ay dib u helaan ku dhowaad 90% aagga Al-Fashaqa waxayna ka codsadeen in ciidanka Itoobiya ay faarujiyaan labada deegaan ee haray.
Dowlada Ethiopia ayaa xal diblumaasiyadeed u raadisay muranka waxayna ku eedeysay ciidamada Sudan inay gudaha u galeen dhulka Ethiopia si qoto dheer, dilka iyo barakicinta beeraleyda iyo dhaca hantidooda
Xiisadda ayaa wali kacsan oo udhaxeysa labada dal, iyadoo kumanaan ciidamo aad u hubeeysan ah la isugu keenay dhulka lagu muransan yahay.
“Dowladda Masar waxay ku riixaysaa Suudaan inay dagaal la gasho Itoobiya, si ay u daciifiso labada dal,” ayuu yiri sarkaalka. “Xaaladda ayaa siin doonta Masar awood dheeri ah oo ay ku sii dhex gasho ciidamada Sudan iyo hay’adaha amniga.”
‘Ku darida shidaal dabkii Soomaaliya’
Qaahira waxay si firfircoon u dooneysay joogitaanka Soomaaliya, oo ah dal dhib badan oo ka mid ah Geeska Afrika kaas oo tobanaan sano u halgamayay sidii uu u dhisi lahaa dowlad dhisan oo amni u dhisan.
“Sannadkii hore oo dhan, Masar waxay isku dayday inay saaxiib la noqoto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo u ballanqaaday gargaar milatari,” ayuu yiri sarkaalka. Laakiin, wuxuu intaas ku daray: “Mas’uuliyiinta Soomaaliya way aqoonsadeen ujeedooyinka xun ee Masar wayna diideen kaalmadii millatari.”
Diblumaasiga ayaa sheegay in kadib markii dowlada federaalka ah ee Soomaaliya ay diiday dalabkaas, Masar waxay u weecatay dhanka Somaliland oo ah dal “ismagacaabay” kana mid ah Soomaaliya kana mid ah dowladaha khilaafku ka dhexeeyo. Bishii Luulyo ee la soo dhaafay, Qaahira waxay ka codsatay saraakiisha ku sugan Hargeysa, “caasimadda” Somaliland inay u oggolaato inay samaystaan ​​saldhig millatari.
“Masriyiintu si aad ah ayey u ogyihiin in cilaaqaadka xumaaday ee u dhexeeya Muqdisho iyo Hargeysa uu isku badali karo iska hor imaad militari wakhti kasta,” Dublamaasiga ayaa carabka ku adkeeyay. “Waxay iskudayeen inay shidaal ku daraan dabka Soomaaliya.”
Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi: “Siyaasada Masaarida ee la marin habaabiyay ee isdaba-marinta ah ayaa ku riixaysa Geeska Afrika ee kacsan in ay sii ahaato gobol ay ka socdaan dagaallo iyo burbur aan dhammaad lahayn.”
‘Doonista saameynta Masar’
Sarkaalkaan ayaa sheegay in siyaasada Masar ee isku dayaysa inay ku kasbato Geeska Afrika ay la micno tahay inay dib ula soo noqoto saameyntii ay ku wayday Bariga Dhexe.
“Masar waxay isku dayeysaa inay saameyn ku yeelato mandaqadeena. Si kastaba ha noqotee, gobolku wuxuu muujiyay rabitaankiisa iyo awoodiisa wax ka qabashada dhibaatooyinkiisa umana baahna Masar inay farageliso arrimaheeda, ”ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeysay Weerarkii Wasiir Janaan Dowladda Kenya weerarka.